‘नेपालकै समृद्ध र उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउने अभियान लिएर हामी मैदानमा छौं ।’ – MEDIA DARPAN
‘नेपालकै समृद्ध र उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउने अभियान लिएर हामी मैदानमा छौं ।’
Media Darpan Pvt. Ltd.	 प्रकाशित २७ बैशाख २०७९, मंगलवार १५:३५
काभ्रेको बेथाञ्चोक गाउँपालिकामा गठवन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार रहेको भगवान अधिकारी यतिबेला घरदैलो अभियानमा छन् । शिक्षित, शालिन, शिष्ट, मृदुभाषि अधिकारी युवा पुस्तामा त लोकप्रिय छन नै त्यसका अलावा अग्रज पुस्तामा पनि उनको लोकप्रियता लोभलाग्दो छ ।
बेथाञ्चोक गाँउपालिकामा तपाईको मुख्य पाँच प्राथामिकता के–के हुन ?
बेथाञ्चोक गाँउपालिकाको माया र स्नेह हर पल हर क्षण मेरो मन, मुटु र मस्तिष्कमा रहेको छ । यहाँ हरेक नागरिकको सुख दुःखको सारथी, असाहयहरूको लागि वैशाखी बन्न सकुँ भन्ने लाग्छ । बेथाञ्चोक शब्द नै मेरो लागि आत्मीय छ । बेथाञ्चोकका हरेक कुराहरूलाई मैले प्राथामिकतामा राखेको छु । यो मेरो सेलेक्सनमा पर्छ त्यो पर्दैन भन्ने कुनै पनि बिषयहरू छैनन् । मेरा लागि विकासका हरेक सुचकाङ्कहरूले उतिकै महत्व राख्दछ । भौतिक पूर्वाधारको विकास, कृषि संगसंगै पर्यटनको विकास, बेथाञ्चोकबासीहरूको जीवनस्तरमा सुधार, दिगो व्यवस्थापन र सुशासन मेरो प्रमुख प्राथामिकता विशेषता हुन ।
समग्र बेथाञ्चोकको शिक्षा, स्वास्थ्यर खानेपानीको विकासको खाका यहाँले कसरी कोर्नु भएको छ ?
अबको पाँच बर्षमा बेथाञ्चोक गाँउपालिकालाई कस्तो बनाउन चाहनु हुन्छ ?
मेरो उम्मेदवारी राजनितिमा आम धुलिखेल बासीको पहुँचको लागि हो ः बस्नेत
आज राति १२ बजेपछि मौन अवधी सुरु